भाद्र ९, २०७८ बुधबार 38
काठमाडौँ । नर्मल डेलिभरी गराउने कि सिजेरियन (शल्यक्रिया) दम्पती एवं गर्भवतीको मनमा उठ्ने तर्क-विर्तक हुन्। सामान्य डेलिभरी गराउनु उचित हुन्छ वा सिजेरियन ? कुन सहज र सुविधायुक्त ? कुन सुरक्षित ? कुन राम्रो ?
किनभने अहिले सिजेरियन डेलिभरीको ट्रेन्ड बढ्दो छ। स्वभाविक एवं सामान्य रुपमा हुन नसक्ने प्रसूतीका लागि यो वैकल्पिक विधी हो। विगतमा यस्तो सुविधा थिएन। त्यसैले कतिपय जटिल अवस्थामा हुने प्रसूतीले गर्भवतीको ज्यानलाई जोखिममा पाथ्र्यो। साथसाथै त्यो एकदमै पीडादायक पनि हुनेगथ्र्यो।
सिजेरियन डेलिभरी गराउने व्यवस्था भएसँगै यसमा केही सहजता आएको छ। खासगरी जटिल अवस्थाको प्रसूती गराउनु परेमा वा स्वाभाविक रुपमा प्रसूती हुन नसक्ने अवस्थामा यो एउटा भरपर्दो र सहज विकल्प बनेको छ।
सिजेरियन डेलिभरी गराउँदा सहज हुनेभएपनि त्यो कृतिम विधी भएकाले कतिपय दम्पती यसमा राजी हुँदैनन्। अर्कोतर्फ बच्चालाई एउटा निश्चित दिन, समयमा जन्माउन चाहने दम्पतीले भने सिजरियनको विकल्प नै अपनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
Nextपतिलाई आफ्नो अगाडी झु,क्न बा,ध्य ग,राउँछन् यी ३ राशिका युवती, तपाईको कुन ?